डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य गम्भी´र, बीपी घटेर ७०/५० मा झर्‍यो
काठमाडौं : चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारको माग गर्दै २४ दिनदेखि अनशनरत प्रा.डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भी´र बनेको छ । डा.केसीका सहयोगी प्रितम सुवेदीका अनुसार बुधबार बिहान डा. केसीको ब्लड प्रेसर (बीपी) घटेर ७०/५० मा पुगेको हो । अनशन लम्बिदै जाँदा डा. केसीको मुटुको चालमा ग’म्भीर समस्या देखिन थालेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन् ।
चिकित्सकका अनुसार उनलाई कतिबेला के हुन्छ भनेर भन्नै नसक्ने अवस्था रहेको छ । स्वास्थ्य ग´म्भीर बन्दा पनि डा. केसीले उपचार लिन मानेका छैनन् । भदौ २९ गते जुम्लाबाट अनशन सुरु गरेका केसीलाई असोज ५ गते नेपालगञ्ज ल्याइएको थियो। नेपालगञ्ज बाट हेलिकप्टरमा असोज ६ गते काठमाडौं ल्याइएपछि उनी त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अनशनरत छन्।
केसीको जीवनर´क्षाको माग गर्दै आवासीय चिकित्सकले मंगलबारदेखि ओपीडी सेवा बहिष्कार गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन्। चिकित्सा शिक्षा सुधारको मागसहित अनशनमा बसेका डा। केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका आवासीय चिकित्सकले ओ´पीडी सेवा ब´हिष्कार गरेका हुन् ।
सरकारले को’रोना भाइरसको समयमा अनशन अन्त्य गर्न अ´नुरोध गरेको छ। डा.केसीले भने औपचारिक वा´र्ता टोली गठन गरेर सरकारले मागको सुनुवाइ गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् । अनशनको २३ औं दिनमा बुधबार पहिलो पटक सरकारी टोली केसीलाई भेट्न शिक्षण अस्पताल पुगेको थियो । शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली दुई सहयोगीका साथ केसी भेट्न अनशनस्थल पुगेको हो